TIARELLA (TIARKA): SIDA LOO ABUURO LOONA DARYEELO WARSHAD - SOOSAARKA DALAGGA
Xilliga diiran, kumanaan kun oo qof oo degan xaafadaha xagaaga iyo kuwa jecel geedo nololeed ayaa mar kale ku soo dhowaanaya deegaankooda dabiiciga ah. Badankooduna waxay isku dayayaan inay abuuraan jawi qurux badan oo qurux badan xagaaga xagaaga. Xaaladda markaad u baahato inaad doorato nooca iftiinka jecel ee beerto, badanaa waxay ku tiirsan yihiin kaliya dhadhankiisa iyo xalka naqshadahooda. Laakiin badi meelo ka mid ah magaalooyinka banaanbaxa waxay ku yaalaan meel isku dhafan oo ah qaybinta iftiinka. Xaaladdan oo kale, hooska cufan, waxay noqoneysaa mid adag in la doorto muuqaal aad u xiiso badan, sababtoo ah dhowr nooc ayaa ku kora xaaladaha hoose ee adag. Xalka dhibaatadani waa mid ka mid ah geedka hoostiisa, xayndaabka xayndaabka ama hareeraha guryaha dhirta ee ka tirsan qoyska Kamenfoomkovy, oo ka mid ah tarka ayaa noqday kuwa ugu caansan. Hoos waxaa ku qoran waxaan tixgelineynaa waxa Tiarell, saxda ah iyo xannaaneynteeda ku sugan berrinka bannaan, sawiro iyo sharaxaad faahfaahsan.
Tiarella ama tiarka waa xubin ka mid ah qoysaska dhagax-dhagaxa. Tani waa warshad quudin ah oo cows ah oo qulqulaya ciidda waxayna leedahay rosette dabeecad leh oo cufan oo cufan leh. Cirifka ubaxa wuxuu ka sareeyaa rosette, celcelis ahaan qiyaastii 15 cm Caanaha dhirta ee geedka waa mid la xasuusto, peduncle waxaa lagu daboolaa burush leh ubaxyo jilicsan oo jilicsan.
Xitaa sidarel, noocyada soo socda ee dhirta waxaa loo yaqaannaa noocyada daboolka dhulka: saxifrajka, biyaha milixda, ingiriisku wuu kacay, curyaanka dillaacay, mimulyus.
Geedka waxaa iska leh noocyada daboolka ee dhulka. Tani waxay ka dhigan tahay in xilliga sii kordhaya, caleemaha tiirsan ay koraan qadar iyo xididba meel kasta.
Ma taqaanaa? Magaca ubaxa "tiarella" waxay ka timaaddaa ereygii hore ee Giriigga "tiara", kaas oo la xidhiidha qalabka casriga ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ubaxyada shakhsi ahaaneed ee kuxiran ay u eg yihiin sharraxan madaxa.
Dhererka caadiga ah ee internode waa qiyaastii 10 cm, dhererka caleemaha sannadkiiba wuxuu kordhiyaa celcelis ahaan 30cm. Muddada ubax ee tiarella waxay bilaabmaysaa qaybta labaad ee guga. Iyadoo maalmood ee ugu horeeya diiran ee May, geedka waxaa lagu daboolay inflorescence balaadhan oo loo siman yahay xargaha. Dareemaha ubaxa waxay sii socotaa ilaa horraan Juun waxayna kudhexeysaa celcelis ahaan 30-40 maalmood. Dhammaadka ubaxyada dhirta ee miraha ayaa koraa qaabka sanduuq, qiyaastii 9 mm oo cabbirka, taas oo ay ka jiraan 2 illaa 6 miraha foomka ukunta-qaabeeya.
Wakiilkan Kamenelomkovy waa noocyo qabow u adkaysta, sidoo kalena ma laha cayayaanka tooska ah iyo cudurada tooska ah ee dalalkeena. Dhulka hooyo ee ubaxa waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin meelo ka mid ah waqooyiga Ameerika. Sidoo kale wakiilada duurjoogta ah ee Tiarella waxaa laga helaa Shiinaha, Kuuriya iyo Japan.
Dhammaan wakiilada tiarell waxay ku kala duwan yihiin noocyo aad u xiiso badan oo noocyada iyo qaababka wakiilada ee lagu beeray meelaha ka mid ah kumanaan beeraley.
Waxaa ka mid ah waxaad ka heli kartaa ubax leh caleen wadnaha ah iyo finger-like, oo u eg caleen maple ah. Waxaa ka mid ah bannaanka u ah noocyada ugu caansan waa:
Tiarella polyphylla - oo ah hooyo ka hooseysa Himalaya, sidaas noocyada ayaa lagu gartaa adagaanta jiilaalka liita, gaar ahaan gobollada adag ee waqooyiga.
Tiarella cordifolia -mid ka mid ah noocyada jiilaalka ugu adag jiilaalka. Guryaha dabiiciga ah waa dhulalka buuraha ee Appalachia.
Tiarella trifoliata- kala duwan ubaxyo casaan leh. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah dhirtu waa caleemo saddex-farger ah.
Tiarella unofoliata- Noocyo waaweyn oo dabiici ah oo u dulqaadanaya dabaasha daran, sida deegaanka dabiiciga ah ee hoygiisa ay yihiin gobollada galbeed ee Canada iyo Alaska.
Ma taqaanaa? Taararka seddexda caleenta ah (Tiarella trifoliata) ayaa si gaar ah loogu soo dhaweeyay Carl Linnaeus. Waxay ahayd cilmi-baaristaan ​​oo markii hore ogaaday qaybaha kala duwan ee caleemaha warshad ku jirta saddex warqadood, taas oo ah cilad-darro noocyadaas ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in beerta gudaha ee ubax aan la helin caan ah gaar ah, ee Galbeedka in ka badan toban sano, noocyo cusub oo dheeraad ah oo dheeraad ah oo la soo saaray. Waxaa ka mid ah, dareen gaar ah waa in la siiyaa:
Tiarella "Madow ee madow"- mid ka mid ah wakiilada ugu quruxda badan ee tiarell. Caleemaha kala duwan ayaa lagu kala soocayaa qaybo badan oo kala duwan, dusha sare ee uu leeyahay hooska macaan ee dhalaalaya leh dusha dhalaalaya, iyo ubaxa waxay leeyihiin dabeecad jilicsan oo jilicsan.
Tiarella "Dhirta Birta" - noocyo kala duwan ayaa loo yaqaan caleemaha khaaska ah. Waxay leeyihiin cagaaran cagaaran, si xoogan loo fujiyey, iyo bartamaha waa beeraha mugdi madow. Ubax leh casaan cas, iftiin cad oo ku dhow.
Tiarella "Neon Lights" - Kala duwanaan badanaa waxaa loogu yeeraa geedka lab ah. Caleenta wakiilka ayaa si xoogan loo laalay, iyo bartamaha waxaa jira sawir midabkiisu casaan ah, taas oo siineysa tiarelle aragti waxoogaa ah. Xaaladdan oo kale, ubaxyadu si adag uma istaagi karaan oo waxay leeyihiin haraaga barafka cad-cad.
Tiarella "Spanish Cross" -loo yaqaan foomka xiisaha leh ee xaashida diidmada, taas oo u egtahay qurxinta kaniisadda. Xagga dhexe ee xaashida waa dhar guduudan, dabeecad kala duwan. Ubaxyo jilicsan oo cad oo casaan ah.
Tiarella "Symphony Spring" - noocyo kala duwan oo ka mid ah kuwa bannaanka u soo baxa ayaa sababay ubax badan oo xagaaga ah. Tani, dhirta u baahan tahay quudin gaar ah iyo waraabinta dheeraad ah.
Goobta iyo ciidda koritaanka
Dhammaan wakiilada kambuuceka ah ayaa wakhti xaadirkan aan la qabin. Laakiin, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxoogaa murugo ah oo kaa caawin doona inaadan degi karin ubax ku yaal ubax, laakiin sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo hagaagsan.
Sifooyinka noocan oo kale ah waxay ku saleysan yihiin astaamaha jir ahaaneed ee hawlaha muhiimka ah ee noolaha dhirta, habka saxda ah ee xisaabinta ay tahay beerashada guuleysiga ee tiara. Hoos waxaan ka eegnaa waxa ku saabsan beerista tareemada, iyo sidoo kale tusaalooyin ku saabsan beerto iyo daryeellada loogu talagalay beerta furan ee sawirka.
Si loo doorto meesha saxda ah ee taranka taranka, waxaa muhiim ah in la ogaado hal xeer: dhirtaasi waxay leeyihiin hoos-jecel yahay.
Si kastaba ha ahaatee, qorraxda ma burburin doono ubax beeray, si kastaba ha ahaatee, iyada oo lagu beeri doono meel quruxsan, waxaad si buuxda u iloobi kartaa muuqaalka qurxinta muuqaalka ah, sida iftiinka qorraxdu si toos ah u oggolaanin ubaxa inuu si wanaagsan u horumariyo. Si fiican u dooro meel ka mid ah hooska dhirta dhirta ama qaab dhismeedka. Xulashada habboon waxay noqon laheyd meel mugdi ah, taas oo mudda dheer ee hooskii iyo wakhtiyada iftiinka gaabanba ay beddeli doonaan. Goobta caadiga ah ee lagu beeri karo dhan tiara waa dariiqyada beerta.
Waa muhiim! Bannaanka ugu khibrad badan ma ku talinayaan in tiarella lagu beero sariiraha ubaxa. Sababtoo ah joogitaanka antennae, si dhakhso ah ayuu u koraa oo ka baxaa meeshii loo qoondeeyay, taas oo gabi ahaanba burburin kara saamiga la qorsheeyey ee ubaxa.
Wakiilada Kamnelomkovyh ayaa ku taliyay in ay ku beeri doonaan ciidda dabacsan, oo la miiray. Baaxadda alkolada ee deegaanka ayaa sidoo kale muhiim ah. U doorbida qoyska waxay noqon doontaa carrada yar ee alkaliin, sidoo kale, nidaam xidid daciif ah waxay u baahan tahay oo kaliya carrada qoyaan-nuugista.
Qoryaha dusha sare loo dhigo
Tiarca - Tani waa mid ka mid ah noocyada yar ee beeritaanka iyo daryeelka saxda ah ee berrinka bannaan oo aad ka baran karto sawirka. Ma jiraan wax adag in la beero geedkaan. Farsamooyinka geeddi-socodka ayaa la mid ah dhirta kale. Intaa waxaa dheer, geedi socodku wuxuu fududeeyaa xaqiiqda ah in dhammaan tiarelly u dulqaadan yihiin isu-tallaalid dhamaystiran inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Si loo beero habboon ee ubax ah ee ciidda, dalool yar oo leh cabbirka 20x20 cm ayaa la sameeyey 20 g oo ah bacriminta adag ayaa lagu shubay godka diyaarisay. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid weyn in la isku daro Bacriminta leh 0.5 koob oo ash alwaax iyo 1 litir oo compost ah. Ka dib markaa 2 todobaad waa lagama maarmaan in la baadho barkada si aad uga hortagto geeridiisa. Thiarell waxay soo saartaa qudaar ahaan, iyo waxa ugu xiisaha badan - sanadka oo dhan. Si arrintan loo sameeyo, qayb ka mid ah baadiyaha waa ku filan si ay qolka u sameyso.
Ubaxyo badan oo qurux badan oo ubaxaaga ah: anemone, aquilegia, asbestbe, Badan, begonous tubta, Brunner, Chistets, Edelweiss, Echinacea, Phlox, Gazania, geykhera.
Wakiil kasta oo ka mid ah dhagxan-sawir aan qabyo ahayn, laakiin tiarella ubax iyo ka dib markii laga beerto waxay u baahan tahay daryeel habboon. Kaliya xaaladdan waa damaanad qaadka jiritaanka caafimaad leh ee baadiyaha ee dhulka dacha.
Xaaladda marka aad go'aansato in aad gasho warshad sariirta ubax, xusuusnow, tani waa wakiil qoyan oo jilicsan ee dhirta. Xilliga qaboobaha, tarkas uma baahnid waraabinta, laakiin baahidani waxay si gaar ah u xanuunsan tahay xilliga xilli sii kordhaya. Sidaa darteed, xagaaga xilli kulul, baadiyaha waa in la waraabiyaa ugu yaraan hal mar maalintii.
Dharka ugu sareeya waxaa la sameeyaa laba jeer sanadkiiba, guga iyo ka dib ubax, marka burooyinkoodii cusboonaysiinta bilaabaan in la dhigo. Celceliska tirada Bacriminta macdanta ah ee la isticmaalayo xisaabinta 20 g halkii 1 sq. Bacrimin walax kasta (AVA, Fertika, Bacriminta Bui, iwm) waxay ku habboon tahay quudinta.
Waxaan sidoo kale kugula talinaynaa in aad naftaada ku barato dharka dabiiciga ah ee dhirtaada: diirka muuska, ukunta, boodhka, diirka basasha, humalaayta potassium, khamiir, biohumus.
Markaas, marka ubaxyada firfircoon ee tiarki u dhow dhammaystirka, iyo ubaxyada ayaa joojiyay in ubaxu ka baxo peduncles, mudada nasasho bilaabmaa. Waqtigan ayaa ah kuwa ugu haboon gudniinka.
Nidaamkan lama magacaabi karo lagama maarmaanka u ah, laakiin ka saarista qaybaha dhintay ee ubaxa waxay ku siin doontaa aragti dhaqameedka ubaxa waxayna ku kaalmeyneysaa inay ubaxdo sanadka soo socda. Nidaamku wuxuu ku bilaabmayaa kormeer dhammaystiran, waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo aqoonsado qaybaha dhimashada ee asliga ah, ka dib marka laga gooyo go'doominta ama mindi waa inay gooyaan qaybaha aan loo baahnayn ama la qalajiyey. Haddii ay tahay dayacaad, waxaad ku gooysay jajab nololeed, ku rid biyo, sida hab aan habooneyn waxaad awood u yeelan doontaa inaad faafiso Chiara.
Waa muhiim! Ka dib markii ubaxa dhirta, waxaa muhiim ah in la sugo dhowr toddobaad wakhti xasilooni ah si ay qaybaha aan muhiimka ah ee Tiarella u bilaabaan inay u engegaan, tani waxay kaa ilaalin doontaa inaad dib u dhigto midabaynta.
Inta badan, xilliga qaboobaha ee sanadka waxaa la qabtaa iyada oo aan wax dhibaato ah. Ka hor inta jiilaalka, saldhigga baadiyaha Tiarella iyo aagga hareeraha nidaamka xididka waa in la gooyaa.
Dhirta yaryar iyo yaraanta ku habboon noocyada qabow waa in la daboolaa. Marka guga yimaado, mulch lama saaro maxaa yeelay xididku wuxuu noqon karaa mid dhali kara.
Tan iyo dhirta ayaa ah noocyada dufanka leh marka ay nalalka diirran ee ugu horreeya soo baxaan, hababka qoyaanka qoyaanka loo marayo caleemaha ayaa la bilaabay. Tan iyo xididka weli wakhti xaadirka ah, Tiarca waxay dareemeysaa la'aanta qoyaan, taasoo keeni karta dhimashadeedii. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro hoyga xilliga qaboobaha iyo daryeelka.
Tiarella qalbi-qaabeeya iyo noocyo kale ee beerto iyo daryeelka waa koox aan qabyo ahayn ee dhirta. Inkasta oo ay taasi jirto, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhammaan isbarbardhigga hawlaha muhiimka ah ee aaladda dhirta si loo soo celiyo daryeelka Tyakena oo ah maalmo dhab ah.
Waxaan rajeyneynaa in qoraalladii dib loo eegay ay gacan ka geysan doonaan horumarinta taranta lo'da ee dalka.